Arimaha Bulshada – Page 4 – Filimside.net
Hooyo Cunugteeda siisay dixri nool dhacdo aragagax leh.
Waxaa baraha bulshada lagu faafiya muuqaal naag ilmo siineyso dixri nool waliba ka siineyso saxan uu ka buuxo. Si ay qortay wargeyska Mirror hopoyadaan oo kasoo jeedo mid kamid ah wadamada aasiya wax dhib ah […]
Warbixinta iyo natiijooyinka bandhiga WWE RAW ee 15/01/2019 (qeybtii 3aad).
Dagaalkii afaraad; kii guuleysta wuxuu ku biirayaa dagaalka afar geesoodka ah. Finn Balor oo ka guuleystay Jindre Mahal. Kadib afhayeenka Bobby Lashley ee Lio Rush ayaa fariin hanjabaad leh u diray xidigaha Seth […]
Warbixinta iyo natiijooyinka bandhigii RAW ee 15/01/2019.
Kadib waxaa riingaha soo galay milkiilaha shirkada WWE Vince McMahon markii uu hadalka bilow is dhahayna waxaa si lama filaan ah usoo galay xidiga John Cena. John Cena ayaa u diiday Vince McMahon inuu […]
Warbixinta iyo natiijooyinkii bandhiga RAW ee 15/1/2019.
Bandhiga ayaa ku bilaabmay milkiilaha shirkada WWE Vince McMahon oo xarunta shirkada soo galayo kaasoo watay gaarigiisa Limousen-ka ahaa. Kadibna waxaa ku xigtay soo laabashadii Braun Strowman uu kusoo laabtay bandhigyada asoo bilaabay inuu […]
Ronda Rousey oo cadeysay sababta ay ugu adkeysaneyso dagaalka Sasha Banks.
Ronda Rousey oo ka qeyb galeysay mid kamid ah barnaamijyada Youtubka ka baxo ayaa waxay ka hadashay dagaalka lagu wado inuu dhexmaro iyada iyo Sasha Banks iyo dhacdadii sanadkii hore ee Wrestlemania. Su’aalihii ugu […]
Maxay jamaahiirta WWE ka dhaheen is wajihitaanka Brock Lesnar iyo Braun Strowman? Yeyse guusha u saadaaliyeen?
Sida lagu faafiyay barta rasmiga ah ee midowga WWE fikrad uruurin jamaahiirta WWE lagu weydiinaayay suurto galnimada uu u heysto Braun Strowman inuu ka guuleysto dhigiisa Brock Lesnar Bandhiga Royal Rumble ayaa wuxuu helay inta […]
SHEEKADII XAASKEYGA JINNI BEY KA AHAATAY qeybtii 16aad amal oo sirteedii ka sheekeysay.
Markaas ayaan ku dhahay amal ihaanada maad iga dhaaftid waxayse iigu jawaabtay ma ahan ihaano ee waa xaqiiqo, markaas ayaan inta xoogaa biyo ah gacanta ku qabsaday ayaan ku firjiyay anigoo u qoslaayo. Markaas ayay […]
Xaqiiqooyin layaab leh oo aadan horay u maqlin (barnaamij cusub) qeybtii 3aad.
Kusoo dhawaada barnaamijkeenii cusbaa qeybtiisa 3aad kaasoo taxane inoo noqon doono maalinkasta anagoo idiinkugu soo gudbin doono waxyaabaha ama xaqiiqooyinka layaabka leh ee aduunkaan ka jiraan kuwaas oo aad u baahantahay inaad wax badan ka […]